किन खुम्चियो चीन–अमेरिकाबीचको व्यापार ? « Kathmandu Pati
किन खुम्चियो चीन–अमेरिकाबीचको व्यापार ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २२ मंसिर आईतवार १८:५५
काठमाडौँ—चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारमा कमी आएको छ । चीन र अमेरिकाबीच जारी व्यापार युद्धकै कारण दुई देशबीचको व्यापारमा मन्दी आएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा नोभेम्बरमा चीनबाट अमेरिकातर्फको व्यापारमा २३ प्रतिशतले कमी आएको हो। व्यापार ३५.६० अर्ब अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ । चिनियाँ भन्सार विभागका अनुसार अमेरिकाबाट हुने आयातमा पनि २।८ प्रतिशतले कमी आएको छ । अमेरिकाबाट चीनतर्फ करिब ११ अर्ब डलर बराबरको मालबस्तु आयात भएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमै मागमा कमी आए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकासीतर्फ १।१ प्रतिशत वृद्धि भई करिब २२२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । आयातमा भने ० दशमलब ३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । चीनले यस अवधिमा १८३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको छ ।